Project Engineer | Authentic Group ﻿
27.4.2019, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
The first foundation of Authentic Group of Companies namely Authentic Construction and Authentic Trading were formed in Yangon, Myanmar in March 2009. For3years, Authen- tic Construction has specialized in the field oflndustrial and Commercial sectors such as facto- ries, apartments, hotels and residential buildings.The Authentic Construction is actually formed not only with civil engineers but also with the leading and well experienced engineers in water and wastewater pro
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်း သိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Contractor များအား လုပ်ငန်းပိုင်း ကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	မိမိတာဝန်ယူသော လုပ်ငန်းအား သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အလုပ်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိမိတာဝန်ယူရသော အဖွဲ့အစည်းအား သေချာစီမံခန့်ခွဲရမည်။
•	Project Manager အား လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု / ပြီးစီးမှုအား တင်ပြခြင်းနှင့် Construction Drawing များရေးဆွဲရမည်။
•	B.E / B.Tech / A.G.T.I (Civil)
•	လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၅)နှစ်ရှိရမည်။
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်း သိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Contractor များအား လုပ်ငန်းပိုင်း ကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းရှိ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Salary is 800,000
Work location F4, Kabar Aye Villa, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon,Yangon, Myanmar
Company Industry: Project Engineer
Job posted: 27/4/2019
Senior Draft Engineer(Pathein)
•	အဆောက်အဦ တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်စွာတွက်ချက်နိုင်ရမည်။ •	အဆောက်အဦး အတွင်း Design ပိုင်းများရေးဆွဲရမည်။ •	အဆောက်အဦ တည်ဆောက်မည့်ပုံစံ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း (Auto CAD) ရေးဆွဲကျွမ်းကျင်ပြီး ဆေ� ...
What we do The first foundation of Authentic Group of Companies namely Authentic Construction and Authentic Trading were formed in Yangon, Myanmar in March 2009. For3years, Authen- tic Construction has specialized in the field oflndustrial and Commercial sectors such as facto- ries, apartments, hotels and residential buildings.The Authentic Construction is actually formed not only with civil engineers but also with the leading and well experienced engineers in water and wastewater pro
•	To ensure legal requirement and health and safety management system (ISO45001)are well established, implement and maintained. •	To driveways and methods to increase and continually improve the awareness of health and safety in the company and ensure participation of all staff •	To train, assist and organize in the training of all staff for all health and safety-related matters •	To be key contact person to all training of all health and safety-related government bodies •	To be accountable for the proper management of health and ...
•	Manage warehouse employees and overall daily operations •	Strong in warehousing management •	Maintaining documentation and keeping accurate records of warehouse activites •	Perform general maintenance of machinery used in the warehouse Inspect condition of tools and equipment •	Planning and controlling of material which includes receiving, storing, issuing, stocktaking. •	Sometimes must be go outside •	perform other related duties and required of the store Department •	Follow instructions from and report to Project Dire ...
84 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Accounting ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလုပ်ကိုင်ရမည်။ •	Advance Excel, Accounting Software များကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် •	Group of companies ဖြစ်သည့်အတွက် HO သာမက နယ် Site များအတွက်ပါ တာဝန်ယူဆောင်ရွှက်ရမည် •	P&L , Final Report များ တင်ပြရမည်။
109 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Monthly Report, Weekly Report များပြင်ဆင်ရမည်။ •	Site များတွင် Vibration test,Noise test များပြုလုပ် စစ်ဆေးပေးရမည်။ •	Safety ပိုင်း check list များ ပြုလုပ်ပြီး PM (or) CM သို့တင်ပြရမည်။ •	Safety နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများအား Demand Requisition Form သက်ဆိုင်ရာ Departmentထံသို့ တင� ...
•	ယာဉ်/ ယန္တရားအကြောင်း နားလည်ပြီး လက်အောက်ခံ ယာဉ်မောင်း၊ ယန္တရားမောင်းများအား ကောင်းစွာအုပ်ချုပ်စီမံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ယာဉ်/ ယန္တရားများ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန� ...
•	Construction Store Manager အဖြစ်အနည်းဆုံး (၈) နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	Excel Software ကျွမ်းကျင်ကိုင်တွယ်နိုင်သူဖြစ်ပြီး မိမိလက်အောက်ရှိ ၀န်ထမ်းများအား သေချာစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site အသီးသီး၏ ပစ္စည်းစတိုစာရင်� ...
•	Construction Team တစ်ခုလုံး၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ နေထိုင်စားသောက်ရေးများ စိတ်ဝင်စားစွာ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ...
•	Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects •	Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget •	Developadetailed project plan to monitor and track progress •	Establish and maintain relationships with third parties/vendors •	Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members •	Perform other related duties as assigned
135 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Pipe Fitting Installation များ၊ Pressure Test လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မိမိဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအား Method of statement, Draw များရေးဆွဲ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မိမိလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးအား ကောင်းမွန်စွာကြီးကြပ် အုပ်ချုပ� ...
•	(Civil, Mechanical, Electrical, Water Supply) ပစ္စည်းများအကြောင်း နားလည်ရမည်။ •	Construction ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်းများကို သေချာစုံစမ်းမေးမြန်း ၀ယ်ယူရမည်။ •	Purchasing ပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နားလည်သိရှိရမည်။ •	သေချာသော၊ မှန်ကန်သောပစ� ...
•	ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ် Marketing အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	လက်ရှိ Client များနှင့် keep in touchဖြစ်ရမည့်အပြင် New Clients များကိုလည်းရှာဖွေရမည်။ •	Negotiation skills ကောင်းရမည်။ •	Weekly, Monthly Report များအား မန်နေဂျာသို့ တင်ပြရမည်။ •	Marketing Plan အကြမ်� ...
136 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	အဆောက်အဦ ၊ လမ်းတံတား ၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	နိုင်ငံတကာ Project များတွင် Cost Estimator, Bill Claim ဆောင်ရွက်ဖူးသူဦးစားပေးမည်။ •	မိမိလက်အောက်ငယ်သားများအား တွက်ချက်မှုနှင့် ကြီးကြပ်မှုကောင်� ...
137 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Finishing နှင့် တွင်းအပြင် အလှအပများ စစ်ဆေးရမည်။ •	Architectural & Interior design ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး Construction working drawing များဆွဲရမည်။ •	Auto CAD/ Photo Shop ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	နေပြည်တော်တွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ Site Engineer (Interior Designer)
•	Well Control vehicle, Fuel and other Admin related job. •	Arrange applying VISAS,Licences,Tickets,Hotel and hiring for vehicle and hotel. •	Handing Documents control, Building maintain, office equipment. •	Prepare reports
143 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
Junior Sale & Marketing
•	ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ် Marketing အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	လက်ရှိ Client များနှင့် Keep in touch ဖြစ်ရမည့်အပြင် New Clients များကိုလည်းရှာဖွေရမည်။ Negotiation skills ကောင်းရမည်။ •	Weekly, Monthly Report များအား မန်နေဂျာသို့ တင်ပြရမည်။ •	Marketing Plan အကြမ်းဖ� ...
•	MD မှညွှန်ကြားသော Project အတွက်လိုအပ်သည့် Presentation များပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာသို့လိုအပ်သော Presentation ပြုလုပ်ပေးရမည်။ •	Project အလိုက် Drawing များအား Designer များ နှင့်ညှိုနှိုင်းပြီး MDထံသို့တင်ပြနိုင်ရမည်။MD ညွှန်ကြားချ� ...
•	Porject Team တစ်ခုလုံးအား စီမံအုပ်ချုပ်ဦးဆောင်နိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိရမည်။ •	တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းအရည်အသွေး နှင့်တိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင ...
Job ads in Project Management Jobs and in Ayeyarwady Region
•	Sub-Contractor / Client နှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရမည်။ •	Microsoft Project နှင့် Schedule ဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Method Statement and Report ပိုင်းပြင်ဆင်ရမည်။ •	Plans, organizes, and coordinates planning activities •	Inputs the work breakdown structure information in means to assess an accurate forecast on time, resources and cash flow of th ...
•	Drawing, Bills, Demands, Contractors များအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ •	QS မှတင်ပြလာသော Bills, Demands, estimates များအားစီစစ်ပြီး CEသို့တင်ပြရမည်။ •	Site သို့ Schedule နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ Progress ရှိမရှိသွာရောက်စစ်ဆေးရမည်။ •	ရုံးချုပ်မှအသုံးပြုရန ...
•	Make prepare the office administration work in daily. •	Able to work withateam and good communication skill. •	Prepare and arrange purchasing item for approval and ensure to receive in time. •	Handling stationary inventory control. Control monitor vehicle oil. •	Other admin work assigned by HOD.
162 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Estimate quantity and costs of materials. •	Tender analysis and drawing. •	Prepare contracts and documents. •	Analyzing completed work and arranging payment to contractor. •	Site visits, assessments and projections for future work. •	Any other duties assigned. •	A good team player with ability to meet tight deadlines.
•	Construction materials များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ရှိရမည်၊ နားလည်ရမည်။ •	Civil Work & Water Waste လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Management ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Team Work ဖြင့်ဦးဆောင်လမ်းညွှန် မှုပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •	မိမိလက်အောက� ...
Job ads in Logistics & Supply Chain Jobs and in Ayeyarwady Region
•	(Civil, Mechanical, Electrical water Supply) ပစ္စည်းများ အကြောင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများ သေချာစေ့စပ်စွာ စုံစမ်းနိုင်ရမည်။ •	သေချာသော/မှန်ကန်သောပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူပေးရမည်။ •	Construction ပိုင်းနှင့် ပတ်သတ်သော ပစ္စည်� ...
174 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Pump နှင့် Pipe Line ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ခြင်း၊ Pump/Valve တပ်ဆင်ခြင်း၊ Installation Drawing ရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	Pump Station နှင့် Pipe Line တွင်တပ်ဆင်ရမည့် ပစ္စည်းများနားလည်းပြီး လိုအပ်သောပစ္စည်းမ ...
•	Electrical Controller ပိုင်းဆိုင်ရာ များနားလည်ပြီး Instrumentation အပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တပ်ဆင်မည့် Control Instrument များ၏ Electrical Circuit Diagram ရေှးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	အဆိုပါ Control/Instrument များအား ကျွမ်းကျင်စွာတပ်ဆင်နိုင်ရမည်။
•	Construction Site အတွက် Safety နှင့် လုံခြုံရေးအပိုင်းတွင် သေချာစွာစစ်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •	Site တွင်ရှိသော ၀န်ထမ်းများ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများအား အထက်လူကြီးများထံ မှန်ကန်စွာတင်ပြနိုင်ရမည်။ •	Site Pressureများအား � ...
Job ads in Construction & Property jobs and in Ayeyarwady Region
•	Factory Expenses Data entry to Peachrteer software. •	Journal entries to Peachtree software. •	Checking invoice for local purchase of factory Accessories and arrange to pay cash to vendor. •	Preparation Inventory (In, Out, Balance) Statement.
•	အဆောက်အဦ တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်စွာတွက်ချက်နိုင်ရမည်။ •	အဆောက်အဦ တည်ဆောက်မည့်ပုံစံ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း (Auto CAD) ရေးဆွဲကျွမ်းကျင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးသူဖြစ်ရမည်� ...
•	စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည်။ •	Maintenance ပိုင်းလည်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ •	နယ်ဆိုဒ်များသို့ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အား ပ်ို့ဆောင်ခြင်း ချိန်းပြောင်းခြင်းများ အား စီမံခ� ...
•	Data Collection of the topographic survey. •	Use computer-aided design to create design and specifications. •	Checking drawings for accuracy and errors. •	Communication with government agencies and local authorities.
•	Auto CAD Civil 3D နှင့် Land Development 2009 Software အားကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Survey Drawing များပိုင်နိုင်စွာ ရေးဆွဲရမည်။ •	တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ Position, Level, Aliment အား Millimeter accretion အထိ တိုင်းတာခြင်း/ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရမည ...
•	ကား kilo များတွက်ချက် စာရင်းသွင်းရမည်။ •	ရုံး စာဝင်၊စာထွက် ကိစ္စများ ဆောင်ရွှက်ရမည်။ •	ရုံးသုံး ပစ္စည်းများ မှာယူခြင်း ၀ယ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။ •	ယူနီဖောင်းများ မှာယူ ချူပ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည� ...
175 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Responsible for HSE training programs and leadership programs •	Responsible for conducting safety,healthy and environmental training programs to contractors,vendors,clients and visitors. •	Responsible for investigations,inspections and reporting of HSE related activities. •	Responsible for preparing policies and procedures relate to HSE and Evaluate and administer company policies and procejures. •	Should able to give timely recommendations to the Project Manager’s in Safety and Environmental issues. •	Responsible for condu ...
181 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်းသိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Contractor များအား လုပ်ငန်းပိုင်းကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူသော လုပ်ငန်းအား သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အလုပ်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရ� ...
•	Projectလုပ်ငန်းအပိုင်း နားလည်ပြီး Drawing, documentsများ ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Project နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Client Consultant ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ပြဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်ချက်ချြာ� ...
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်းသိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Contractor များအား လုပ်ငန်းပိုင်း ကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူသော လုပ်ငန်းအား သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အလုပ်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန ...
•	အထပ်မြင့်(သို့)လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	Project တစ်ခုလုံး၏ Estimatetအားကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တွက်ချက်နိုင်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်မှုရှိရမည်။ •	Auto CAD ဖြင့် 2D Construction Drawing (Detail Drawing) များရေ� ...
183 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Drawing, Bills, Demands, Contractors များအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ •	QS မှတင်ပြလာသော Bills, Demands, estimates များအားစီစစ်ပြီး CEသို့တင်ပြရမည်။ •	စာချုပ်မရှိသောလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကွက်အလိုက် PEမှ တင်ပြလာသည့်အပေါ် QS၏ မှတ်ချက်များစစ်ဆေး� ...
187 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Design ပိုင်းအားဖတ်နိုင်ပြီး မိမိတာဝန်ယူသော လုပ်ငန်းအား(Rebar/Formwork/Concrete) အရည်အသွေး ပြည့်ဝအောင် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	နေစဉ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကို တင်ပြနိုင်ပြီး ပြီးစီးမှုကို တိုးတက်အောင်မြ� ...
•	Civil Work & Water Waste လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဘူးရမည်။ •	Construction Field နှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ •	Construction ပစ္စည်းများအားနားလည်သိရှိရမည်။ •	Management ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Team Work ဖြင့်ဦးဆောင်လမ်းညွှန်နိုင်ရမည်။ •	မိမိ ...
197 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
198 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်း သိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Contractor များအား လုပ်ငန်းပိုင်း ကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူသော လုပ်ငန်းအား သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အလုပ်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိမ� ...
•	Develop, lead and execute purchasing strategies •	Track and report key functional metrics to reduce expenses and improve effectiveness •	Partner with stakeholders to ensure clear requirements documentation •	Forecast price and market trends to identify changes of balance in buyer-supplier power •	Monitor and forecast upcoming levels of demand
•	Must have teamwork •	Must understand sales and Marketing Plan •	Can guide way plan to subordinates •	Must coordinate and negotiate with Customers(B2B, B2C) •	Must deal with customers' complaints •	Achieve sales target •	Daily, Weekly & Monthly Reports must be submitted to Superior.
212 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Factory Expenses Data entry to Peachrteer software. •	Journal entries to Peachtree software. •	Calculation of oversea & local purchase of raw material costing. •	Checking invoice for local purchase of factory Accessories and arrange to pay cash to vendor. •	Preparation Inventory (In, Out, Balance) Statement.
214 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
224 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
Project Engineer Engineering & Technical jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Authentic Group Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Project Engineer Jobs in Myanmar, jobs in Yangon